Halatra taova – Toliara: voamaso valo tratra tamin’ireo fito lahy | NewsMada
Par Taratra sur 21/02/2020
Olona fito naiditra vonjimaika am-ponja, ny alarobia teo, taorian’ny fanadihadiana sy ny famotorana nataon’ny polisy any Toliara, mikasika ilay ”Raharaha halatra taova” (voamaso). Raharaha niteraka resabe saika nampisavorovoro mihitsy ny filaminam-bahoaka.
Nahafahana nisambotra ireto olona fito voarohirohy ireto ny loharanom-baovao voarain’ny polisin’ny Fip ao Toliara. Hita nandritra ny famotoran’ny polisy ireo porofo rehetra tsy nahafahan’ireto olona ireto nandà intsony, toy ny fitaovana fanalana maso ary mbola nahitana voamaso. Voaporofo ihany koa fa manana trano roa tsy lavitra ny toerana nitrangan’ny loza ny olona iray isan’ireo tompon’antoka amin’ity raharaha ity. Nipetraka telo andro tao amin’io trano io ilay tovolahikely mialoha ny nakana ny voamasony satria nahitana piti-dra ny akanjony, nandritra ny fisavan’ny polisy. Niroso tamin’ny fisavana tanteraka ny polisy ka nahitana voamaso valo hafa indray tao amin’ity lehilahy ity. Nafenina tao anaty selofanina mialoha ny nampidirana azy tao anaty bankiraro. Fantatra tamin’ny famotorana nataon’ny polisy fa voamaso vao nalaina tany am-pasana ny sasany amin’izy ireo, izany hoe, misy ifandraisany amin’ny resaka vaky fasana nirongatra tato ho ato, ireto voamaso hita ireto. Mitohy, araka izany, ny fikarohana ataon’ny polisy manoloana ny fanimbazimbana ny razana noho ity resaka halatra maso ity. Tsy mahataitra ny mpamaky fasana intsony indray ny taolam-paty fa lasa ny voamaso indray no tena alain-dry zalahy. Toeram-pandevenana iray ao Toliara no nahitana vaky fasana.
“Aoka ho malina hatrany…”, hoy ny polisy
Nanamafy hatrany ny talem-paritry ny filaminam-bahoaka ao Toliara fa fiaraha-miasa eo amin’ny OMC ny nahafahana nametraka lamina taorian’io tranga io ka nahitana izao vokatra izao izay nentina nisorohana ny savorovoro sy nitazonana ny fandriampahalemana. Isan’izany ny fitsidihana ny toeram-pianarana sy ny fidinana teny anivon’ny fokontany sy ny fanaovana fisafoana andro aman’alina manerana ny kartie rehetra, indrindra ny tao Antaninarena. Niangavy ny vahoaka, araka izany, ny polisy hifanome tanana amin’ny mpitandro filaminana hahafahana mametraka fandriampahalemana ho an’ny rehetra. Mandeha ihany koa ny laharana maitso 017 amin’ny Airtel ka tokony tsy hisalasala ny rehetra hanome vaovao marim-pototra hialana amin’ny tsaho, araka ny fanazavan’ny talem-paritry ny filaminam-bahoaka hatrany. Nomarihin’ny polisy fa mipetraka ao Toliara an-tampon-tanàna ny efatra amin’ireto jiolahy ireto fa ny telo kosa, monina any amin’ny kaominina manodidina. Tokony ho malina hatrany ny rehetra fa tsy kely lalana ny ratsy ary mba hifampizara vaovao sy hametraka fitokisana amin’ny mpitandro filaminana.